Aoxun Group မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
Windows ကို OEM Software များ
Windows 10 ကိုကုန်ပစ္စည်း Key ကို
Microsoft Office 2016 လက်လီ Box ကို
Windows 10 ကို Pro ကို Pack ကို
Windows 10 ကို Pro ကို OEM
Microsoft က Office 2013 ကိုလက်လီ Box ကို
Windows 8.1 ကို Pro ကို Pack ကို
Microsoft က Office ကိုကုန်ပစ္စည်း Key ကို
Windows7ကို Pro ကို Pack ကို
Microsoft ကရုံး 2016 လိုလားသူ
Adobe ကဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း Software များ
Aoxun Group မှ Microsoft က Value ကို-Added Reseller Microsoft က OEM စနစ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်။
2003 ခုနှစ်မှစ. Aoxun Group မှမိမိတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြန်ဆန်စွာစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြီးထွားဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုကူညီပေးဖို့အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဖြေရှင်းချက်ပေးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဎ 12years အတိတ်, Aoxun Group မှ Software များအရင်းအမြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတန်ဖိုးကိုဖောက်သည် '' ထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများတွေ့ဆုံသည် Aoxun Group မှထက်ပို 12,00 ဖောက်သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပြတင်းပေါက်များနှင့်ရုံး product key ကိုပေးသွင်းလျှင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် efficent ways.As အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျက်နှာစာများချဲ့ထွင်ရန်ကူညီပေးသည် အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ဝယ်ယူနှင့်အတူဝယ်လိုအား။ ထို့အပြင်အမှန်တကယ်ယုံကြည်ကိုးစားလမ်းအတွက်စျေးကွက်စျေးကွက်ဦးဆောင်နှင့်စျေးကွက်အပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှု business.With နှစ်ဆအနိုင်ရမှကျနော်တို့ဖောက်သည် Oversea များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဆော့ဖ်ဝဲကိုဖြေရှင်းချက်ကနေတဆင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ယုံကြည်စိတ်ချတည်ထောင်ရတဲ့ခဲ့ကြရတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော win10 လိုလားသူကိုရီးယားအဖြစ် Multi ဘာသာစကားများဗားရှင်း, win10 လိုလားသူအီတလီဗားရှင်းအသစ်ကို 2017, စပိန်, win10 လိုလားသူပြင်သစ် OEM, စသည်တို့အတွက် win10 လိုလားသူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်, ဤသူအပေါင်းတို့, ပူ USA တွင်အရောင်းရဆုံး, အီတလီ, စပိန်, ပြင်သစ်, ကနေဒါ, ဗြိတိန်များမှာ ဂျာမန်, ဆွစ်ဇာလန်, ဂျပန်, ဖိလစ်ပိုင်, အင်ဒိုနီးရှား, ကိုရီးယား, မလေးရှား, စင်္ကာပူ, တုံ့ပြန်ချက်ရောင်းချနေ 50 နိုင်ငံများထက် etc.more ပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည် Microsoft အရင်းအမြစ်များအပေါ်သရုပ်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို encuroges ..
Aoxun Group မှဆော့ဝဲသယံဇာတနှင့်စီမံကိန်းဖြေရှင်းချက်ကမ်းလှမ်း
Windows 10 ကိုအိမ်, ပြတင်းပေါက် 10 လိုလားသူ, ပြတင်းပေါက် 10 ပညာရေး, ပြတင်းပေါက် 10 စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, Window Server ကို 2016, server ကို 2012 R2, ဆာဗာ, 2012 Datacenter, Window 8.1 ကို Windows7Pro ကို, win7 Ultimate, Office ကို 2016 အပါအဝင် 1.Microsoft ပြတင်းပေါက်များနှင့်ရုံး software ကိုလက်ကား, အိမ်နှင့်စီးပွားရေး, ရုံး 2016 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်, ရုံး 2016 အိမ်နှင့်ကျောင်းသား, ရုံး 2016 စံ, etc
2.Software OEM: Custom Software များဘာသာစကားများ, အကောက်ခွန် COA စတစ်ကာ, System ကိုစီမံကိန်း, etc ။
3. ကို Adobe Software များထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်းနှင့် product key ကိုပေးဝေ။
အဘို့အ Aoxun Group မှ , အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းစကားတစ်ခုပေးမှကြိုဆိုပါ၏! Submit